အက်ဆစ်နဲ့ပက်ခံရသူ အမျိုးသမီးလေးတွေရဲ့ အနုပညာပြခန်း -
အက်ဆစ်နဲ့ပက်ခံရသူ အမျိုးသမီးလေးတွေရဲ့ အနုပညာပြခန်း
Posted on January 11, 2019 January 11, 2019 Author Aye Mon Kyaw	Comment(0)
“ကျွန်မကို ခံရသူ/ဒုက္ခသည်လို့ မမြင်စေချင်ဘူး၊ အနုပညာရှင်အဖြစ် မြင်စေချင်မိတယ်”
အီရန်ဟာ အမျိုးသားဝါဒ ကြီးစိုးတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးတွေဟာ မကြာခဏဆိုသလို ခွဲခြားဆက်ဆံခဲ့ရတဲ့ နိုင်ငံ၊ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခံရတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ အီရန်နိုင်ငံမှာ အက်ဆစ်နဲ့ ပက်တဲ့ အမှုတွေ အများဆုံး ဖြစ်ပွားလေ့ရှိပြီး ခံရသူ ဒုက္ခသည်အများစုကတော့ အမျိုးသမီးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးနဲ့ လူ့အခွင့်ရေးဆိုတာလည်း ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ နိုင်ငံမှာ အီရန်အမျိုးသမီးတွေဟာ အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးကြောင့် အက်ဆစ်နဲ့ ပက်ခံနေရပါတယ်။
အများစုကတော့ ခေါင်းကနေ ခြေထိ အပြည့်ဖုံးထားတဲ့ ဝတ်စုံမျိုး မဝတ်ဘဲ အသားပေါ်တဲ့ အဝတ်မျိုး ဝတ်မိလို့ အက်ဆစ်နဲ့ ပက်ခံရတာပြီး တချို့ကတော့ အကြမ်းဖက်တဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူဆီက ကွာရှင်းခွင့် တောင်းမိလို့ အက်ဆစ်နဲ့ ပက်ခံရသလို တချို့ကတော့လည်း လက်ထပ်ခွင့်တောင်းတာကို လက်မခံလို့ အက်ဆစ်နဲ့ပက်ခံကြရပါတယ်။
အီရန်မှာ အက်ဆစ်နဲ့ ပက်ခံရတဲ့ အမျိုးသမီးဒုက္ခသည်တွေ ပိုမို များပြားလာပြီး သူတို့ဟာ လူတောမတိုးရဲတော့သလို ပျက်စီးသွားတဲ့ သူတို့မျက်နှာသွင်ပြင်ကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ နှာခေါင်းရှုံ့တာကိုလည်း ခံရပါတယ် ။
ဒါပေမဲ့ Victims(ခံရသူ) တွေထဲက တချို့ဟာ သူတို့ဘဝဆိုးကို လက်မလျှော့ခဲ့ကြပါဘူး။ ၃၅နှစ်အရွယ် အီရန်အမျိုးသမီး Massoumeh Attaie ဟာ အက်ဆစ်နဲ့ပက် ခံရလို့ မျက်နှာပျက်ဆီးသွားသူတွေထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သူ(မ)ကိုတော့ သူ(မ)ရဲ့ ယောက္ခထီးက အက်ဆစ်နဲ့ ပက်ခဲ့ပါတယ်။ အကြောင်းရင်းကတော့ သူ့ရဲ့ သားဆီကနေ ကွာရှင်းခွင့်တောင်းလို့ပါတဲ့။
Related Article >>> မျက်မှောက်ခေတ်ရဲ့ မြနန္ဒာတို့အကြောင်း
ဒီအမှုဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၈နှစ်ကျော်က ဖြစ်ပွားခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး တစ်ဘဝလုံး ပျက်ဆီးသွားတဲ့ သူ့မျက်နှာအတွက် တရားမျှတမှုကို အချိန်အတော်ကြာအထိ မရခဲ့ပါဘူး။ အစ္စလာမ်ဥပဒေအရ သူမရဲ့ မျက်လုံးနှစ်လုံးပေါင်းမှ အမျိုးသားတစ်ယောက်ရဲ့ မျက်လုံးတစ်လုံးစာပဲ တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအမှုကို အဆုံးထိ သွားဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပေမဲ့ တရားစွဲတာကို မရပ်ရင် သူ(မ)ရဲ့ သားလေးကိုလည်း အက်ဆစ်နဲ့ ပက်မယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်ခဲ့တာကြောင့် အမှုကို ရပ်ခဲ့ရပါတယ်။
တရားမျှတမှုကလည်း မရ၊ မျက်နှာကလည်း ထာဝရပျက်ဆီးသွားခဲ့ရပေမဲ့ သူ(မ)ဟာ စိတ်ဓာတ်အားငယ်ခဲ့သူတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ “ကျွန်မကို ခံရသူ/ဒုက္ခသည်လို့ မမြင်စေချင်ဘူး၊ အနုပညာရှင်အဖြစ် မြင်စေချင်မိတယ်” လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် သူ(မ)ဟာ သူ(မ)လိုပဲ အက်ဆစ်နဲ့ ပက်ခံရတဲ့ဘဝတူ အမျိုးသမီးတွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး သူတို့ရဲ့ ဘဝအကြောင်းကို အနုပညာကတစ်ဆင့် ပြောပြဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ ရွေးချယ်လိုက်တဲ့နေရာကတော့ အာရှီယန်နာ အနုပညာပြခန်းဖြစ်ပြီး တီရန်မြို့မှာ ရှိပါတယ်။
အက်ဆစ် victim တစ်ဦးနှင့် သူ(မ) ၏ ပန်းချီအနုပညာ
အခုဆိုရင် အာရှီယန်နာ အနုပညာပြခန်းမှာ အက်ဆစ်ကြောင့် မျက်နှာပျက်စီးသွားသူတွေရဲ့ ပန်းချီလက်ရာတွေ၊ သူတို့ရဲ့ ဖြစ်ရပ်ဆိုးတွေကို ပြောပြထားတဲ့ အနုပညာလက်ရာတွေကို တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ Attaie ကတော့ အာရှီယန်နာ ပြခန်းမှာ လက်ရာမြောက်တဲ့ ပန်းကန်လုံးတွေ အိုးတွေ ရုပ်တုတွေကို ပညာရှင်တစ်ယောက်လို လုပ်ကိုင်ရင်း သူ(မ)သားလေးနဲ့ ဘဝကို အေးအေးချမ်းချမ်း ဖြတ်သန်းနေပါပြီ။ “အခုတော့ ကျွန်မ လုံးဝ အမှီအခိုကင်းသွားပြီလေ” လို့ အာရှီယန်နာ ပြခန်းထဲက သူ(မ)အနုပညာလုပ်ငန်းအကြောင်းကို ဂုဏ်ယူစွာပြောလေ့ရှိပါတယ်။
“ဒီပြခန်းလေးထဲက အနုပညာပြပွဲလေးဟာ ကျွန်မလို အဖြစ်ဆိုးနဲ့ ကြုံရသူတွေကို အိမ်ထဲမှာပဲ ပုန်းမနေကြဖို့ နဲ့ နောက်တစ်ကြိမ် လူတောထဲ ပြန်ဆံ့ဖို့အတွက် ကူညီပေးနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်” လို့ Attaie က ဆိုပါတယ်။
သူ(မ)ရဲ့ ပန်း ချီ လက်ရာ တွေကို ပြသဖို့ ရောက်လာတဲ့ Massoumeh Attaie
Related Article >>> ဆောရီး ရှင်တို့အခုထိ တူညီတဲ့အခွင့်အရေးမရသေးပါဘူး!!!
“ဒီလို အက်ဆစ်နဲ့ပက်ခံရသူတွေရဲ့ အနုပညာလက်ရာတွေကို လက်ခံပြသပေးတာဟာ သူတို့ဘဝကို နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်ထနိုင်အောင် ကူညီပေးတာမို့ သိပ်ကို ကောင်းပါတယ်” လို့ အာရှီယန်နာပြခန်းကို လာလည်သူတစ်ယောက်က ဆိုပါတယ်။
ဒါကြောင့် ခုဆို အက်ဆစ်နဲ့ပက်ခံရသူ အမျိုးသမီးလေးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ဘဝအသစ်ကို အနုပညာကနေတစ်ဆင့် ရှာတွေ့သွားပြီ ဖြစ်တဲ့အပြင် သူတို့ရဲ့ ခံစားချက်နဲ့ စွမ်းရည်ကို ပေါင်းစပ်အသုံးချပြီး တီရန်က အာရှီယန်နာ ပြခန်းလေးမှာ ပြသထားကြပါတယ်။
ပန်းချီပြပွဲကနေ ရတဲ့ ငွေတွေကိုတော့ “အီရန်နိုင်ငံ အက်ဆစ်နဲ့ ပက်ခံရသူများကို ထောက်ပံ့ကူညီမှု အသင်း” ကို ပြန်လည်လှူဒါန်းတာမို့ ယောင်းတို့လည်း တီရန်ရောက်ရင် အာရှီယန်နာ ပန်းချီပြခန်းလေးကို သွားလည်ဖို့ မမေ့နဲ့နော်။
“ကြှနျမကို ခံရသူ/ဒုက်ခသညျလို့ မမွငျစခေငျြဘူး၊ အနုပညာရှငျအဖွဈ မွငျစခေငျြမိတယျ”
အီရနျဟာ အမြိုးသားဝါဒ ကွီးစိုးတဲ့ နိုငျငံဖွဈပွီး အမြိုးသမီးတှဟော မကွာခဏဆိုသလို ခှဲခွားဆကျဆံခဲ့ရတဲ့ နိုငျငံ၊ ဖိနှိပျခြုပျခယျြခံရတဲ့ နိုငျငံဖွဈပါတယျ။ အီရနျနိုငျငံမှာ အကျဆဈနဲ့ ပကျတဲ့ အမှုတှေ အမြားဆုံး ဖွဈပှားလရှေိ့ပွီး ခံရသူ ဒုက်ခသညျအမြားစုကတော့ အမြိုးသမီးတှေ ဖွဈပါတယျ။
အမြိုးသမီးအခှငျ့အရေးနဲ့ လူ့အခှငျ့ရေးဆိုတာလညျး ပြောကျဆုံးနတေဲ့ နိုငျငံမှာ အီရနျအမြိုးသမီးတှဟော အကွောငျးပွခကျြအမြိုးမြိုးကွောငျ့ အကျဆဈနဲ့ ပကျခံနရေပါတယျ။
အမြားစုကတော့ ခေါငျးကနေ ခွထေိ အပွညျ့ဖုံးထားတဲ့ ဝတျစုံမြိုး မဝတျဘဲ အသားပျေါတဲ့ အဝတျမြိုး ဝတျမိလို့ အကျဆဈနဲ့ ပကျခံရတာပွီး တခြို့ကတော့ အကွမျးဖကျတဲ့ ခငျပှနျးဖွဈသူဆီက ကှာရှငျးခှငျ့ တောငျးမိလို့ အကျဆဈနဲ့ ပကျခံရသလို တခြို့ကတော့လညျး လကျထပျခှငျ့တောငျးတာကို လကျမခံလို့ အကျဆဈနဲ့ပကျခံကွရပါတယျ။
အီရနျမှာ အကျဆဈနဲ့ ပကျခံရတဲ့ အမြိုးသမီးဒုက်ခသညျတှေ ပိုမို မြားပွားလာပွီး သူတို့ဟာ လူတောမတိုးရဲတော့သလို ပကျြစီးသှားတဲ့ သူတို့မကျြနှာသှငျပွငျကွောငျ့ ပတျဝနျးကငျြရဲ့ နှာခေါငျးရှုံ့တာကိုလညျး ခံရပါတယျ ။
ဒါပမေဲ့ Victims(ခံရသူ) တှထေဲက တခြို့ဟာ သူတို့ဘဝဆိုးကို လကျမလြှော့ခဲ့ကွပါဘူး။ ၃၅နှဈအရှယျ အီရနျအမြိုးသမီး Massoumeh Attaie ဟာ အကျဆဈနဲ့ပကျ ခံရလို့ မကျြနှာပကျြဆီးသှားသူတှထေဲက တဈယောကျဖွဈပွီး သူ(မ)ကိုတော့ သူ(မ)ရဲ့ ယောက်ခထီးက အကျဆဈနဲ့ ပကျခဲ့ပါတယျ။ အကွောငျးရငျးကတော့ သူ့ရဲ့ သားဆီကနေ ကှာရှငျးခှငျ့တောငျးလို့ပါတဲ့။
Related Article >>> မကျြမှောကျခတျေရဲ့ မွနန်ဒာတို့အကွောငျး
ဒီအမှုဟာ လှနျခဲ့တဲ့ ၈နှဈကြျောက ဖွဈပှားခဲ့တာ ဖွဈပွီး တဈဘဝလုံး ပကျြဆီးသှားတဲ့ သူ့မကျြနှာအတှကျ တရားမြှတမှုကို အခြိနျအတျောကွာအထိ မရခဲ့ပါဘူး။ အစ်စလာမျဥပဒအေရ သူမရဲ့ မကျြလုံးနှဈလုံးပေါငျးမှ အမြိုးသားတဈယောကျရဲ့ မကျြလုံးတဈလုံးစာပဲ တနျဖိုးရှိပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဒီအမှုကို အဆုံးထိ သှားဖို့ ဆုံးဖွတျခဲ့ပမေဲ့ တရားစှဲတာကို မရပျရငျ သူ(မ)ရဲ့ သားလေးကိုလညျး အကျဆဈနဲ့ ပကျမယျလို့ ခွိမျးခွောကျခဲ့တာကွောငျ့ အမှုကို ရပျခဲ့ရပါတယျ။
တရားမြှတမှုကလညျး မရ၊ မကျြနှာကလညျး ထာဝရပကျြဆီးသှားခဲ့ရပမေဲ့ သူ(မ)ဟာ စိတျဓာတျအားငယျခဲ့သူတော့ မဟုတျပါဘူး။ “ကြှနျမကို ခံရသူ/ဒုက်ခသညျလို့ မမွငျစခေငျြဘူး၊ အနုပညာရှငျအဖွဈ မွငျစခေငျြမိတယျ” လို့ ပွောခဲ့ပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ သူ(မ)ဟာ သူ(မ)လိုပဲ အကျဆဈနဲ့ ပကျခံရတဲ့ဘဝတူ အမြိုးသမီးတှနေဲ့ ပူးပေါငျးပွီး သူတို့ရဲ့ ဘဝအကွောငျးကို အနုပညာကတဈဆငျ့ ပွောပွဖို့ ဆုံးဖွတျခဲ့ပါတယျ။သူတို့ ရှေးခယျြလိုကျတဲ့နရောကတော့ အာရှီယနျနာ အနုပညာပွခနျးဖွဈပွီး တီရနျမွို့မှာ ရှိပါတယျ။
အကျဆဈ victim တဈဦးနှငျ့ သူ(မ) ၏ ပနျးခြီအနုပညာ
အခုဆိုရငျ အာရှီယနျနာ အနုပညာပွခနျးမှာ အကျဆဈကွောငျ့ မကျြနှာပကျြစီးသှားသူတှရေဲ့ ပနျးခြီလကျရာတှေ၊ သူတို့ရဲ့ ဖွဈရပျဆိုးတှကေို ပွောပွထားတဲ့ အနုပညာလကျရာတှကေို တှမွေ့ငျနိုငျပါတယျ။ Attaie ကတော့ အာရှီယနျနာ ပွခနျးမှာ လကျရာမွောကျတဲ့ ပနျးကနျလုံးတှေ အိုးတှေ ရုပျတုတှကေို ပညာရှငျတဈယောကျလို လုပျကိုငျရငျး သူ(မ)သားလေးနဲ့ ဘဝကို အေးအေးခမျြးခမျြး ဖွတျသနျးနပေါပွီ။ “အခုတော့ ကြှနျမ လုံးဝ အမှီအခိုကငျးသှားပွီလေ” လို့ အာရှီယနျနာ ပွခနျးထဲက သူ(မ)အနုပညာလုပျငနျးအကွောငျးကို ဂုဏျယူစှာပွောလရှေိ့ပါတယျ။
“ဒီပွခနျးလေးထဲက အနုပညာပွပှဲလေးဟာ ကြှနျမလို အဖွဈဆိုးနဲ့ ကွုံရသူတှကေို အိမျထဲမှာပဲ ပုနျးမနကွေဖို့ နဲ့ နောကျတဈကွိမျ လူတောထဲ ပွနျဆံ့ဖို့အတှကျ ကူညီပေးနိုငျမယျလို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ” လို့ Attaie က ဆိုပါတယျ။
သူ(မ)ရဲ့ ပနျး ခြီ လကျရာ တှကေို ပွသဖို့ ရောကျလာတဲ့ Massoumeh Attaie
Related Article >>> ဆောရီး ရှငျတို့အခုထိ တူညီတဲ့အခှငျ့အရေးမရသေးပါဘူး!!!
“ဒီလို အကျဆဈနဲ့ပကျခံရသူတှရေဲ့ အနုပညာလကျရာတှကေို လကျခံပွသပေးတာဟာ သူတို့ဘဝကို နောကျတဈကွိမျ ပွနျထနိုငျအောငျ ကူညီပေးတာမို့ သိပျကို ကောငျးပါတယျ” လို့ အာရှီယနျနာပွခနျးကို လာလညျသူတဈယောကျက ဆိုပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ခုဆို အကျဆဈနဲ့ပကျခံရသူ အမြိုးသမီးလေးတှဟော သူတို့ရဲ့ ဘဝအသဈကို အနုပညာကနတေဈဆငျ့ ရှာတှသှေ့ားပွီ ဖွဈတဲ့အပွငျ သူတို့ရဲ့ ခံစားခကျြနဲ့ စှမျးရညျကို ပေါငျးစပျအသုံးခပြွီး တီရနျက အာရှီယနျနာ ပွခနျးလေးမှာ ပွသထားကွပါတယျ။
ပနျးခြီပွပှဲကနေ ရတဲ့ ငှတှေကေိုတော့ “အီရနျနိုငျငံ အကျဆဈနဲ့ ပကျခံရသူမြားကို ထောကျပံ့ကူညီမှု အသငျး” ကို ပွနျလညျလှူဒါနျးတာမို့ ယောငျးတို့လညျး တီရနျရောကျရငျ အာရှီယနျနာ ပနျးခြီပွခနျးလေးကို သှားလညျဖို့ မမနေဲ့နျော။
Reference links: alaraby.co.uk , deccanchronicle.com , rudaw.net
Tagged acid, Massoumeh Attaie, News, right, victim, women
Biography News Women News
Posted on February 6, 2019 Author Aye Mon Kyaw
နိုင်ငံရေး ခရီးကြမ်းကြီးကို ခက်ခက်ခဲခဲ ဖြတ်ခဲ့ရပေမဲ့ ဇာတ်သိမ်းကတော့…
Posted on April 11, 2019 April 11, 2019 Author Stella
Posted on April 17, 2019 Author Aye Mon Kyaw
ဒီနှစ်ထဲ သယ်မလာသင့်တော့တဲ့ gym အယူအဆမှားများ
Ex က ကိုယ်ပုံတင်တိုင်း Like ပေးနေတာဘာကြောင့်လဲ